MetaCX: Jikwaa Ndị Nlekọta Ndụ Ndị Ahịa Na-arụkọ Ọrụ Na Nweta Sitere Na-arụpụta | Martech Zone
Ihe karịrị afọ iri gara aga, mụ na ụfọdụ ọrụ SaaS rụkọrọ ọrụ - gụnyere ịrụ ọrụ dị ka onye njikwa ngwaahịa maka Scott McCorkle na ọtụtụ afọ dịka onye ndụmọdụ mwekota na-arụ ọrụ na Dave Duke. Scott bụ onye na-agbanwe agbanwe nke na-emeri ihe ịma aka ọ bụla. Dave bụ onye njikwa akaụntụ na-agbanwe agbanwe na-enyere ndị otu kachasị na ụwa aka iji hụ na atụmanya ha gafere.
Ọ bụghị ihe ijuanya na ha abụọ jikọtara ọnụ, nyochaa ihe isi ike ndị dị na ahịa B2B, mmejuputa, na ndị ahịa na-achọ… wee nweta azịza, MetaCX. MetaCX bụ ikpo okwu wuru iji hụ na ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ahịa na-arụkọ ọrụ ọnụ iji depụta, soro, ma gafee ebumnuche azụmaahịa ndị ahịa.
Ndị na-azụ ahịa na SaaS na ụlọ ọrụ ngwaahịa dijitalụ na-eche na enweghị ntụkwasị obi na a ga-edebe nkwa ahịa. Kedu ihe ga - eme ma emechara azụmahịa ahụ?
MetaCX ewuola ikpo okwu nke na-agbanwe ka ndị na-azụ ahịa na ndị ahịa si arụkọ ọrụ ma merie ọnụ. MetaCX na-enye ohere a na-ekerịta ebe ndị na-ebubata ya na ndị na-azụ ahịa nwere ike ịkọwa na tụọ nsonaazụ ọnụ, kwado ahịa, ihe ịga nke ọma, na ndị na-enyefe ya n'akụkụ ezigbo azụmaahịa ndị ahịa na-ahụ.
Ihe eji emekọrịta ihe n’etiti ndị na - azụ ahịa na ndị ere ere:
Atụmatụ ga nke Ọma - Gbaa mbọ hụ na rụzuru ihe azụmaahịa achọrọ site na ịmepụta atụmatụ usoro ọ bụla maka ndị ahịa ọ bụla.
Templates - Mepụta usoro ihe ịga nke ọma ahaziri iche maka iji usoro yana mmadụ iji mee ka ọ dị mfe ma bulie nsonaazụ na-aga nke ọma.
Ịma Ọkwa - Mee ka amara gị ọkwa mgbe olile anya ma ọ bụ onye ahịa sonyere akwa mmiri ịkekọrịtara ma ọ bụ nwee mmekọrịta n'etiti mmiri ọ bụla ka ị nwee ike meghachi omume n'oge.
Obere oge - Usọrọ isi oge na ahịa lifecycle-ọhụrụ mmekọrịta, dechara mmejuputa, na aka mmegharị ọhụrụ iji anya nke ọma na-agba ọsọ.
Usoro ndụ ndụ - Mepụta usoro ihe ịga nke ọma kwekọrịtara na usoro ndụ ọ bụla iji hụ na gị na ndị ahịa gị na-ezute ebumnuche dị mkpụmkpụ na ogologo oge.
Aka - Jiri anya nke uche hụ ihe dị n'ime MetaCX iji hụ na onye ọ bụla nọ n'otu ibe ahụ ma na-arụ ọrụ maka ebumnuche na ebumnuche.
Oke - Kpọọ ndị ahịa na atụmanya ka ha keta oke, oghere ọnụ ebe ị nwere ike idekọ ma mekọrịta ọnụ na atụmatụ ihe ịga nke ọma.
ìgwè - Weta ahụmịhe ndị ahịa na ndụ wee bido imekọrịta ihe na ndị nketa dị mkpa site na ịmepụta otu ndị mmadụ dabara na ọkwa ndụ ọ bụla.
Ndogide Ntuziaka - Chọpụta njigide njigide zoro ezo site na nsuso omume na omume ndị na-ekpughe ndị ahịa na-achọ iwe ọkụ.
Nsonaazụ ọ bụla na atụmatụ ihe ịga nke ọma na MetaCX nwere ihe jikọrọ ya na akara ngosi na metrik na-eji data iji chọpụta nsonaazụ nsonaazụ na usoro ndụ ndị ahịa.
Ihe ndị ahịa gị na-eche ga-emetụta ụdị data ị dọbara n'ime MetaCX. Nwere ike ịdọrọ ihe omume site na ngwaahịa gị ma ọ bụ site na usoro ọzọ gụnyere CRM gị, usoro ego gị, ma ọ bụ usoro mmemme gị. Ozugbo usoro azụmahịa gị na-enyefe ihe omume n'ime ikpo okwu site na njikọ, MetaCX na-eji njirisi na oge ị ga-akọwa iji gwa gị otu onye ahịa ga-esi rụpụta nsonaazụ.
Akụ n'ime m Martech Zone Ajụjụ ọnụ Podcast maka mkparịta ụka na-abịanụ na MetaCX President Jake Sorofman.
Njikere ịhụ MetaCX? Debanye aha taa na ndị otu ga-enye ngosi ngosi nke ikpo okwu.
Rịọ MetaCX Demo
Tags: kpisNdụ ahịa ndụusoro ndụ ndụmetacxịnyịnyasaasndụ saasnjikwa sacy lifecylceNkwado ire ahịaatụmatụ ịga nke ọma